China Famokarana herinaratra elektromagnetika famokarana sy famokarana | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny andiana feeder vibration elektromagnetika dia ampiasaina amin'ny fitaterana akora fanosotra, granular ary vovoka avy ao anaty fitoeram-pivarotana na fantsona mankany amin'ilay fitaovana mandray isa, mifanaraka ary mitohy.
Ny andiana feeder vibration elektromagnetika dia ampiasaina amin'ny fitaterana akora fanosotra, granular ary vovoka avy ao anaty fitoeram-pivarotana na fantsona mankany amin'ilay fitaovana mandray isa, mifanaraka ary mitohy. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny fitaovam-pisakafoanana amin'ny conveyor fehikibo, ascenseur siny, fitaovana fitiliana, fikosoham-bary simenitra, crusher, crusher ary granular na vovoka viscous an'ny departemanta indostrialy isan-karazany; ampiasaina amin'ny famonoana mandeha ho azy, famonosana habetsahana sns sns Ary ny fizotran'ny fanaraha-maso mandeha ho azy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana, metallurgy, arina, fitaovana fananganana, indostrian'ny hazavana, indostrian'ny simika, herinaratra, milina, voamaina, fanafody ary indostria hafa.
1. Lanja kely sy lanja maivana. Izy io dia manana tombony amin'ny rafitra tsotra, fametrahana mora, tsy misy faritra mihodina, tsy misy fanosorana, fikojakojana mety ary vidin'ny fandidiana ambany.
2. Afaka manova sy manokatra ary manidy ny fikorianan'ny fitaovana eo noho eo izy, ary avo ny fahamendrehan'ny sakafo.
3. Ny fanaraha-maso herinaratra dia mandray ny faritra atsimo SCR antsasaky ny onja fanitsiana, izay afaka manitsy tsikelikely ny habetsahan'ny sakafo, ary mahatsapa ny fanaraha-maso afovoany sy ny fifehezana mandeha ho azy ny fizotry ny famokarana.
4. Amin'ny dingan'ny famahanana, ny fitaovana dia mitohy mihetsiketsika manipy micro, ary kely ny fitafian'ny famahanana.
5. Ity andiana feeder vibration electromagnetic ity dia tsy mety amin'ny tranga misy fepetra takiana amin'ny fipoahana.
Ny fahaizan'ny fitsaboana t / h
Previous: Czg feeder mihombo avo roa heny
Manaraka: HGM andiany miompana feeder saribao
Feeder hovitrovitra mahomby
Mpihinana fihovan'ny herinaratra
Vidin'ny mpamahana hovitrovitra elektromagnetika
Sakafo mihozongozona mahery vaika
Mpanamboatra fitaovana fihinana hovitrovitra
Mpanamboatra feeder vibration
Vidin'ny feeder hovitrovitra